Tanànan'ny tanàna sy vohitra Kildare
Ankafizo ny fandraisana lehibe any amin'ny tanàna kely. Miroboka ao amin'ny tranon'ny Palladian sy ny vakoka taloha, manandrana sakafo manondraka vava ary miaina ny kolontsaina Irlanda tena.
Ny lova tsy manam-paharoa, ny toerana mahavariana, ny trano misy kalitao, ny sakafo mahavariana ary ny fiantsenana maneran-tany dia sasany amin'ny zavatra iainana miandry anao amin'ny fandraisana anao am-pitiavana any amin'ireo tanàna sy vohitra maro.
Mandritra ny dia iray andro, na ny faran'ny herinandro, mankafy ny fidirana amin'ny faritra rehetra any Irlandy. Jereo ny majika amin'ny ala mahavariana, hazakazaka, taranja golf, tranombakoka ary ivom-panao lova, traikefa nahafinaritra an'ny fianakaviana, lakandrano sy fitsangatsanganana ala. Kildare no tena tsara indrindra any Irlandy amin'ny faritany iray.